Nzira Yekuchengeta Yako Simba Riricheya - Kuchengetedza Simba Simba Wiricheya
Nzira Yokuchengetedza Sei Simba Rako hwiricheya
simba hwiricheya kuchengetedza kwakakosha kwazvo mukuchengetedza yako hwiricheya muchimiro chakanaka. Sachigaro wemagetsi wakagadzirirwa kuti uve nehupenyu hurefu, asi izvi zvinogona kuzadzikiswa chete kana mushandisi akazvichengeta hwiricheya nguva dzose.
simba mavhiripu huya zvakajairika nebheteri uye bhaja charger, aya ndiwo marongedzero anoshandiswa kusimudzira chigaro uye kusimbisa iwo akajairwa maficha anouya nemhando iyi yechigaro.
Simba racho hwiricheya mushandisi anofanira kudzidza maitiro ekuchengetedza yavo hwiricheya painotambirwa, kana usati wagamuchira chishandiso. Izvi zvinobvumidza mushandisi kutanga tsika yekuchengetedza iyo inogona kuita kuti chigaro chako chemagetsi chigare kwenguva yakareba ipapo kana pasina chekuchengetedza.
ndinorova hwiricheya bhatiri
Chinhu chakakosha mukuchengetedza chako chigaro chesimba chine hutano kuribhadharisa kazhinji. Iyo yakakurudzirwa nguva yekuchaja yako hwiricheya ndipo paunenge wakarara panguva yehusiku, ino inguva yakakwana yekuchaja yako hwiricheya bhatiri.
Kunyangwe iwe usiri kushandisa chigaro chenguva yakareba kana kana chigaro chisina kushandiswa kwechinguva, iwe unofanirwa kugara uchichaja bhatiri rako kudzivirira kukuvara kana kuora kwemidziyo.
Kuziva chigaro chako chesimba idanho rakakosha pakuwedzera hupenyu hwesimba rako hwiricheya. Iwe unofanirwa kuverenga chidimbu chega chemabhuku chiripo chechigaro chako kana cheya chauri kufunga kutenga. Chinyorwa chechigadzirwa ndicho chakanyanya kukosha zvinyorwa zvinowanikwa pachigaro chako. Inofanira kukutsanangurira maitiro ekuchengetedza uye kushandisa chigaro.
simba hwiricheya Chirongwa Chekugadzirisa
dzimwe nguva hwiricheya Vagadziri vanopa nguva kana nguva yekuchengetedza pazvinenge zvakakosha kuti chigaro chako chigare. Kunyangwe izvi zvingave zviri izvo nezvimwe zvigadzirwa, zvirinani kutanga unoteedzera purogiramu yekutevera pasvondo kana zuva nezuva.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive chinoshanda chimwe nechimwe chinhu chako hwiricheya ine, izvi zvinokutendera iwe kugadzirisa matambudziko anogona kumuka panguva yekushandisa.
Ndino chengetedza sei “mabhatiri angu emawiricheya emagetsi?
Zvinhu Zvakakosha Kuti Uzive Nezve Wiricheya Yako